WZX ayina Inkqubo engenan- Manufacturing Factory | Wanzhanxing Apparel
Isilayidi se-Shelbear Slip
I-wzx ivulele i-bist emibing gough enight terssuit bodysysysuit odwebisa
Jonga indlela abathengi bethu abavavanya ngayo iimveliso zethu
WZX ayina Inkqubo engenan- Manufacturing Factory
WZX nokujika yangaphantsi nomakhi Factory kuyintoTop Shapewear Companies kunye Suppliers Shapewear Ulwenziwo lokuthile.
Oku ividiyo senkqubo-ayina, abasebenzi yethu yokusebenza nzima kumasifundisane ngasemva.
Sinento inkqubo isampulu esisiseko kakhulu kwiimveliso zethu shapewear, yangaphantsi, activewear, kunye kubeleka.
Sixhasa inkonzo isiko isampuli njengoko kuyilo isiko nokunika inkonzo brand olunye-stop.
Efuna ukuvelisa iimveliso ophezulu imfanelo esenza ukufumana impumelelo. Kwaye singathanda ukufumana impumelelo kunye nawe.
Ukuqonda Model Business Ngaphambi kokuba ujule, masikhe siqale sijonge oko shapewear na. Ezi zangaphantsi isiseko eyenzelwe ukuba sculpt umfanekiso kabani. izinto ezinjalo ukunceda umntu enxibe ukuba babe inkangeleko nomtsalane bethanda. Abanye abantu bakhetha ukubhekisela impahla ezifana njengengubo lesiseko. Iinkampani mveliso Custom shapewear abe uluhlu olubanzi iimveliso. Unakho ukuthenga kwi-mveliso ngqo evela kumenzi okanye ngqo. Injongo kukuba ukuthenga ngesambuku ngexabiso eliphantsi kunye angathengisa kubathengi bakho ukwenza inzuzo. Emva koko, oku kulandelayo zezinye zezinto eziphambili ekufuneka uyazi xa uqala loo ishishini a.
Ukuqala, kuya kufuneka ukuba ufumane shapewear yakho ngqo evela kumenzi. Ngenxa uqalisa, ukuze ube mali enkulu. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ukuba basebenze kunye eliphantsi ubuncinane umyalelo shapewear umenzi.
Ngenxa iklayenti, kubalulekile ukusebenza kunye kumenzi ukuba unalo ezi mpawu zilandelayo:
• Othengisa iintlobo ngeentlobo iimveliso ezikumgangatho ophezulu
• Good e siko ukuphakheja
• Yiba icebo fast and ngempumelelo nokuthunyelwa
• zentengo uKhuphiswano
WZX - Professional engenan- Factory yoMvelisi
1. ungenza ngokusesikweni iimveliso ngokweemfuno zakho
2. Sinako ngokukhawuleza ukwenza iisampulu uze ubahlangule iintsuku ezisi-7.
3. Siza ungenza ngokusesikweni logo ye band yakho.
4. ungenza ngokusesikweni imibala nguwe.
5. Sinako ukwenza imveliso plus-ubungakanani kunye nobugcisa nekhono.
6. Siza ungenza ngokusesikweni iipatheni ofuna.
inkqubo yemveliso ukuze elungelelanisiweyo wethu nokujika
Computer Programming zokufunda kwakhona
SANTONI engenan- Machine
SANTONI engenan- Machine Workshop
3D eyodwa ukusika
Factory Brand Service and Certification
Nezinto bakunike umsebenzi omnye-stop online / inkonzo brand ulwenziwo kweintanethi.
BSCI mveliso siyasebenzisana brand NILIT, umthengisi OEKO-TEX100 eqinisekisiweyo vulu
wokuhlamba iimpahla Label
Ubushushu Transfer Ilogo eprintiweyo
Opp Package ngentando yakho
Professional engenan- Manufacturer, Ukukunika Healthy engenan- Life
Yintoni ungafuna ukubuza
1: Yintoni ixesha wophathelo?
Ixesha lonikezelo kuxhomekeke iindlela zokuthumela. Ngokuqhelekileyo kuthatha iintsuku 3-7 nge UPS baveze. iintsuku 7-15 nge express emoyeni. iintsuku 60 nge elwandle
2: Ngaba utyelele mveliso yakho?
Sibamkela ngokufudumeleyo. Xa sinayo ucwangciso lwakho, siya kwenza amalungiselelo ukulungiselela iqela leengcali yokuthengisa elandelela ityala lakho.
3: Yintoni ixesha kwakho phambili?
Ixesha phambili kuthatha kuxhomekeke kubungakanani. Izinto stock kuya kwenziwa amalungiselelo nqanawa kwiiyure 24-48. Izinto Elungiselelweyo zihlelwe ukuthunyelwa zingadlulanga iintsuku 15-30 zomsebenzi.
4. Ingaba ukwamkela OEM / ODM?
Sinako ukunikela iimveliso OEM / ODM ngamnye ngokweemfuno zakho! I minimum ubungakanani kunye nexabiso kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
5. Ngaba ukwamkela LOGO ulwenziwo?
Singayamkela LOGO ulwenziwo, MOQ: 1pc
I-wzx yomzimba we-whaper bodyssuit injineli kunye neephaneli zokuzonwabisa ukuze ibulale i-tummy yakho. Uyilo oluphezulu lwe-highcececececececececec ukudala i-slimmer feminel silhouette. I-shaper ye-teaper enye yenzelwe ngaphandle kwe-zipper okanye i-hook kunye neliso kwindawo yakho ye-tummy, ke ngoko ukuninika ijika elifudumeleyo kwaye likuncede ubonakale mhle kwiingubo!
I-en-thaigh bodysuit yongeza inqaku lokusebenza elifana nokuphefumla, ukuwina kunye nokuthambisa, kwaye kuya kukunceda ukufezekisa umzimba weyure. Iibhendi zolawulo ezingabonakaliyo zinenzuzo yokuphakamisa ezantsi kunye nokugqobhoza isisu, umva, amathanga kunye namathanga. I-TARSSECS STORSEAREARE. Le yeyona nto igqibeleleyo, iqhekeza elilula.-Ukuphefumla kwaye ukhululekile ukuba ulusu lwakho kunye nemizimba yakho.-Iindlela& I-Silky-Lamckic yeFleek = Intuthuzelo iyonke-Akuqinisekiswa yimigca ye-panties ebonakalayo.-Imigca eguqukayo enezilayidi zangaphambili-Ukuba unxibe izilwanyana zawo nawuphi na umthambo kunye ne-top ye-tops yabasetyhini.
Olu phononongo lwezinto ezithengiswa kakhulu kubathengi bethu (abathengisi beqonga elikwi-intanethi). Uphononongo lweenkwenkwezi oluntlanu kubathengi lungumThetho oMgangatho weeMveliso kunye neNkonzo yeQela elihle.
Le bodysuit ibukeka incinci, kodwa yenziwa ngentambo ethunyelweyo engeniswayo, kwaye isebenzisa itekhnoloji ye-360 ye-36-degree ye-360, i-sgree engenasiphelo, i-sub-i-shap kunye ne-hook kunye neliso kwindawo yakho ye-tummy, ikunika i-tummy yendawo yakho, ikunika umntu othandanayo curve kwaye wenze ukuba ubonakale mhle kwiingubo!I-Steyim yethu engenamthungo ibeka umzimba wakho ngaphandle kokufaka i-Butt yakho ye-3D, i-Stereo eguqulweyo ye-Teed eguqulweyo ye-Elastic ephuculweyo, iphinde iphakamise ubume bakho bendalo, yandisa i-silhouette yakho ngaphandle Umzabalazo, ngobunono kwaye ulume ngobunono i-butt yakho, esenza ibonakale iguqulwe, ijikeleze kwaye yomelele.
I-wzx ithumele i-shasterm yomzimba welebheli yabucala
Ukulawulwa kokhululeka i-slip esonga iibhotile, ukuchaza imilenze emde sexy, i-anti-skid skick uyilo ngaphakathi kwi-hem, ukuthintela isiketi esivela phezulu. Ezi zinxibo zisisiseko zisisiseko ezithandekayo kunye neemilo zithambeka, esinqeni, ngasemva, namathanga.